Kabo Si Farshaxamysan Loogu Soo Dhigay Magaca Eebbe Oo Suuqyada Hargeysa Lagu Dhex Iibinayo |
Kabo Si Farshaxamysan Loogu Soo Dhigay Magaca Eebbe Oo Suuqyada Hargeysa Lagu Dhex Iibinayo
Hargeisa(GNN):-Kabo ka samaysan Maro oo sida Dacas oo kale shanta farood la galiyo ah oo si farshaxamaysan loogu soo dhigay halka faraha hore ee cagta la galinayo Magaca Ilaahay, ayaa lagu dhex arkay suuqyada magaaladda Hargeysa.
Qaar kamid ah dukaamada kabaha lagu iibiyo ee magaaladda Hargeysa ayaa Dadweynaha ka Iibinaya Waxa lagu muujiyay magaca Alle kabaha hoostooda, shanta farood ee lugaha, si aanay Ishu u qaban waxa hareeraha lagaga Xardhay Farshaxan Indhaha soo jiidanaya, balse si toos ah loogu badheedhay in magaca Raxmaanka SWT loogu soo qoray cagta hoosteeda, taasoo gef ku ah Umadd Muslim ah in loo Iibkeeno.
Ganacsatada ayaa had iyo jeer ka feejignayn, waxyaabaha inta badan caalamka ka dhaca ee dalalka diinta Islamka necebi ku kacaan, waxaana dhacda in sidan oo kale ganacsatadu mararka qaar soo dejiyaan Alaabooyin lagu khaldayo isla markaana loogu soo dhigo waxyaabo diinta ka baxsan.
Kabahan lagu soo xardhay magaca Eebbe ayaa waxa Xarunta Hubaal caawa fiidkii noogu keenay dhalinyaro, soo iibsatay oo markii hore ee ay iibsanayeen aan sidaasi ugu sii fiirsan, balse maalmo kadib arkay, waxaanay noo sheegeen inay ka iibsadeen meherad ku taalla Hargeysa, isla markaasina aanay ahayn beerkan ay sitaan oo kaliya balse ay badan yihiin, oo jiraan dadyow kale oo laga iibiyay.
Kabahan ayaa ah kuwo inta badan ay xidhaan dhalinyaradu,
Talaabada Magaca Alle loogu soo qoray kabaha la xidho ee lala galayo meel kasta oo xun waxa ay tusaale u tahay Dagaalka lagula jiro Diinta Islaamka iyo Dadkeeda isla markaana loogu soo gabanayo kolba meel aanay dhaadayn.
Bulshada reer Somaliland oo ah bulsho boqolkiiba Boqol Islam ah ayaa intooda badani aanay ku baraarugsanayn dhacdooyinka noocan oo kale ah, balse ay tahay arrin u baahan in bulshada laga wacyigeliyo, inay jiraan xumaan aan indhuhu si toos ah u qaban oo looga soo waaridayo dalalka Gaalada oo iyagu dagaal dhinac kasta ah kula jira Diinteena suuban.
Sidoo kalena waxa muhiim ah in loo sheego ganacsatada dalka keenta Alaabada, si ay aad ugu baraarusanaadaan ama uga feejignaadaan waxyaabaha ay kasoo iibsanayaan wadamada debada gaar ahaan kuwa Gaalada, si ay uga badbaadiyaan bulshadeena Islaamka ah, wixii dhaqanka diinta ka baxsan ee loogu soo qaraniyo badeecadaha ay ganacsatadu dalka keento.
Ma aha markii koowaad ee arrimaha noocan oo kale ah lagu arko gudaha Somaliland, waxaa jirtay marar badan oo bulshada reer Somaliland gacanta ku dhigeen kabo dadku xidho oo sidan oo kale Magaca Alle xaga hoose lagaga soo qoray.